Tolino Vision 4 HD, ilay eReader alemanina izay tara | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | mpamaky, Tolino
Nandritra ny taona 2016 dia nahita maodelin'ny trano sy marika eReaders rehetra fantatra sy tsy fantatra izahay. Amin'ny tranga maro dia nahita maodely mihoatra ny iray isika, ankoatra ny Tolino Alliance izay nanolotra modely eReader iray fotsiny, ny Pejy Tolino. Saingy hiova izany. Vao tsy ela akory izay ny pejy Tolino Alliance dia nampiditra eReader vaovao antsoina Tolino Vision 4 HD izay hatakalony manomboka rahampitso any amin'ny fivarotana ny Alliance.
Ity eReader ity dia mampiditra endrika vaovao maro ao anatin'ny elanelana ary eny an-tsena mihitsy aza satria ankoatry ny fananana ny teknolojia Carta, ny fitaovany tsy tantera-drano izy ary manana bateria lehibe.
Tolino Vision 4 HD dia eReader misy efijery 6-inch miaraka amin'ny teknolojia Carta. Ity fitaovana ity toy ny maro hafa dia manana processeur 1 Ghz Freescale miaraka amin'ny ondrilahy 512 Mb. Ny Tolino Vision 4 HD dia manana 8 GB fitehirizana anatiny 6 Gb ihany no azo ampiasaina. Ny efijery fitaovana dia manana vahaolana 1448 x 1072 teboka misy 300 ppi. Ankoatr'izay, ny efijery dia mikasika ary manana jiro. Amin'izao fotoana farany izao dia miova ny fitaovana satria tsy hanolotra a fotsiny fampisehoana hazavana miaraka amin'ny jiro manga Fa kosa, ny fitaovana dia hanova ny aloky ny jiro lamba arakaraka ny hazavana eo amin'ny tontolo iainana na ny andro amin'ny andro. Zavatra tena mahaliana ho an'ny mpamaky maro.
Tolino Vision 4 HD dia hisongadina miaraka amin'ny teknolojia tap2flip izany dia hahafahantsika mamadika ny pejy avy any aoriana. Ny batterin'ity eReader ity dia 1.500 mAh, bateria iray izay hanome fahaleovan-tena mandritra ny herinandro maromaro ary manana teknolojia vaovao mitovy amin'ny Quick Charge izay mamela ny fizakan-tena bebe kokoa aza tsy misy sarany.
Amin'ity tranga ity dia miatrika eReader isika izay mahatohitra rano. Tolino Vision 4 HD dia manana HZO izay manondro fa mifono anatiny sy tsy misy rano izy io na dia tsy azontsika atao aza ny misitrika azy, satria mitranga amin'ny fitaovana hafa.
Ho an'ny ambiny, ny Tolino Vision 4 HD dia manana kojakoja maodely Tolino hafa, izany hoe kapila rahona 25 Gb, fifandraisana Wi-Fi, fidirana mivantana amin'ny fivarotana Tolino, sns…. Mikasika ny endrika, tsy vakio fotsiny ny rakitra pdf na ebook mobi fa mamaky ebook amin'ny endrika Epub ihany koa.
Na dia tsy mbola fantatsika aza ny vidiny, ny Tolino Vision 4 HD dia manolo ny Tolino Vision 3 HD ka mieritreritra izahay fa hitovy ny vidiny, izany hoe 159 euros, na dia tsy maintsy miandry rahampitso aza isika hahalala azy satria tsy mbola nisy fivarotana an-tserasera naneho an'io. Na izany na tsy izany dia eReader mahaliana izy io, maodely iray izay na dia tara aza dia afaka manao fifaninanana henjana amin'ireo eReaders sasany eny an-tsena, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Tolino » Tolino Vision 4 HD, ilay eReader alemanina izay tara
Tolino dia tsy manana Tolino Page fotsiny, fa Tolino Shine, Tablet ary ny kinovan'ny fahitana teo aloha.
Tena mandeha tsara izy io, ary mora be ampiasaina ary mifandray tsara amin'ny app maimaimpoana. Raha mbola ... tsy manana Huawei 🙂 ianao
Ary azonao atao ny mamaky ilay epub alaina ao amin'ny epublibre toy ny tagus
Salama, manana ny tagus tactile naroson'ny OCU aho fa tsy mamela heloka ny taona ary te hividy iray izay ahafahako mamaky amin'ny hazavana fa miakatra ny vidiny, izay tsy azoko amin'ny vaovao, tsy misy mamaky fa liana amin'ny tolino na italiana izay tsy hitako ao. mena iray
Feno an'ireo tranomboky amerikanina ... Lalao video
Google Play Store dia manampy fizarana 'Fironana' hahitana fotoana tsara indrindra